Wasiirrada Dalka Koongo Oo Heli Doona Mushaarkoodii Inta Ay Nool – somalilandtoday.com
Wasiirrada Dalka Koongo Oo Heli Doona Mushaarkoodii Inta Ay Nool
(SLT-Congo)-Xukuumadda xilka sii banaynaysa ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo ayaa waxa ay difaacday go’aanka ay wasiirradii hore ugu ballan qaadday inay heli doonaan mushaarkoodii inta ay nool yihiin iyo weliba dhaqaale kale.
Go’aanka dhammaan wasiirraada bishii lagu siinayo in ka badan 2000, halka kharash intaa ka badan la siin doono Ra’iisul Wasaarayaashii hore, ayaa waxaa ka dhashay dhaleecayn xooggan.
Inta badan dadka dalkaasi ayaa waxa ay la daalaa dhacayaan saboolnimo baahsan.
Qof la taliye u ah Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo ayaa kharashaadkaasi waxa uu ku qeexay mid aan badnayn oo loo baahan yahay si loo xaqiijiyo in wasiirradu aanay ku soo dhicin faramarnaan markii ay xafiiska banneeyaan.
Heshiiskan ayaa waxa uu qorayaa in wasiirradii hore ay inta ay nool yihiin ay bishii heli doonaan in ka badan 2000 oo doolar, halka Ra’iisul Wasaarayaashii hore ay heli doonaan lacag waxoogaa intaas ka badan oo ay u dheer tahay dawayn caafimaad oo bilaash ah oo dibadda loogu qaado.
Qof u dooda xuquuqda aadanaha ayaa heshiiskaasi ugu yeeray inuu yahay iskuday lagu doonayo in lagu sii wado xatooyadii lagu hayay hantida dadweynaha.
Arrintan kuma koobna oo kaliya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo, ee dadka Nigeria ayaa waxa ay aad ula fajaceen markii ay ogaadeen in senator-radda ay bishii qaataan in ka badan 30 kun oo doolaar oo kharashaad ah.
Sidoo kalana xildhibaannada Kenya ee la siiyo mushaarka aadka u badan ayaa waxaa lagu yaqaan in markii la doortaba ay jaangoystaan kharashka ay qaadanayaan.